Home Wararka Dowladda Somalia oo ka codsatay Kenya in aay soo celiso xiriirka Diblomaasi...
Dowladda Somalia oo ka codsatay Kenya in aay soo celiso xiriirka Diblomaasi ee labada dal.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay soo celineyso xiriirkii Kenya, iyadoo ugu baaqday Kenya inay dib u furto Safaaradeeda Soomaaliya.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa caddeysay inay dib safaaradeeda uga furi doonto Nairobi.
Waxaa maalmaha soo socda bilaaban doona tallaabooyin dib xiriirka labada dal loogu so celinayo, iyadoo wafuud labada dhinac ka kala socota ay tagi doonaan Muqdisho iyo Nairobi.
Dowladda Kenya ayaanan weli ka jawaabin arrintan, walow sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aay MOL u xaqiijiyeen in dalabka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya uu ka yimid Agaasimaha NISA Fahad Yasin oo la sheegay in lacago badan ay Dowladda Kenya ay xayiraad saartay lacagahaas oo la sheegay in aay ku jireen koontooyin aay ku qoran yihiin Xaaskiisa iyo laba qof kale oo qaraabo la ah.